ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउनुपर्छ : प्रसाई – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७७, सोमबार २२:०६
काठमाडौं, २२ असार । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्यहरुले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र कलह आपसी समझदारीमा हल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि पनि नेताहरुले आपसी सहमति कायम गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका अध्यक्ष तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एन. के. प्रसाईले नेताहरुले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । उनले भने,‘अहिले पार्टी फुटाउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन् । फुट्नु हुँदैन् । दुनियाँ जगतलाई हसाउनुहुँदैन् ।’ प्रसाईले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने एजेण्डा नभएको सुनाए ।
पार्टी र सरकारको अहिलेको प्राथमिक मुद्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेपनि नेपालको भूमी भारतले कब्जा गरेको भन्दै ती भूमि फिर्ता ल्याउन सबै एकजुट हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने,‘अहिले हाम्रो प्राथमिक मुद्दा स्वाधिनता हुनुपर्छ । भारतसँग द्धिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ । पटक पटक वार्ता गर्नुपर्छ । यदि विवाद हल हुँदै नभए हामीले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । नैतिक समर्थनको लागि अपिल गर्नुपर्छ । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ उनले स्वाधिनताको रक्षा नगरीकन समाजवादको कुरा गर्न नसुहाउने पनि तर्क गरे ।